Subskile သည်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော DJ တစ်ခုဖြစ်လာပြီးအခြားသော DJs များအတွက်ဥပမာချမှတ်ပေးသည်။ အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဘော့ ဘ‌‌လော့ခ်
Subskile အွန်လိုင်း virtual ဖျော်ဖြေပွဲ 8 ပြုတော်မူပြီ။
Subskile သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်မသိပါက၎င်းသည်သင့်ကိုတကယ်ကူညီလိမ့်မည်။ Subskile သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျော်ရွှင်သောဗြိတိန် DJ နှင့်ဂီတထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဂီတတွင်စတင်ခဲ့သော်လည်းသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာအလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူဟာ Swag Goat, Funky Hips, Horror.EXE စသည်ဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သီချင်းအနည်းငယ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူကဂီတဖန်တီးရတာကိုနှစ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမရပ်ချင်ဘူး။ ထို့အပြင်သူသည်ဂီတပြုလုပ်ရန်သူ၏သူငယ်ချင်းအချို့ကိုမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ သူသည် Spotify၊ Amazon Music, Apple Music နှင့်အခြားအရာများစွာဖြစ်သောထိပ်တန်း streaming platform များရှိအပုဒ်အားလုံးကိုထုတ်လွှင့်သည်။ သူသည်အပတ်စဉ်တေးသီချင်းများကိုသူ့ဂီတတွင်ရရှိသည်၊
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Subskile သည် Numark Mixtrack Platnium FX ကိုရရှိခြင်းဖြင့်သူ၏ DJing ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ သူက 'ငါမှာ Numark Mixtrack Platnium FX ရတယ်' ဆိုတဲ့ YouTube မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုတင်လိုက်တယ်၊ အဲဒီဗီဒီယိုကနေသူနဲ့အတူ DJing နဲ့အတူတိုးတက်လာတာကိုသင်တကယ်တွေ့နိုင်တယ်။ သူဟာဗီဒီယိုထဲမှာတော်တော်လေးအထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်ရောစပ်ခဲ့တယ်။ သူကပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ DJ တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီလား။ ပုံရသည်
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ပိုပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ DJ ဗီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းပေါ်မှာလူအများအပြားကသူရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှကြလိမ့်မယ်။ သူသည်တဖြည်းဖြည်းကျော်ကြားမှုမြင့်တက်လာသည်။ တစ်နေ့တွင် Marshmello, Slushii နှင့်အခြားသောကျော်ကြားသော DJs များကဲ့သို့ကျော်ကြားလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် Subskile ကကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အပ်နှံခြင်းတို့သည်အောင်မြင်မှုရှိစေသည်ဟုယုံကြည်သည်။ သင်ချစ်သောသူအားဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနှင့်ဟုသူကဆိုသည်။ သူ၏ DJing နှင့်တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုတွင်ထိုအတိုင်းပင်သူအောင်မြင်ခဲ့သည်။ လက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်းသည်သင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်ဟုသူယုံကြည်သည်။
ဒါ့အပြင် Subskile ကတခြားလူတွေကို DJ ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေသည်။ မှုတ်သွင်းခံလူအနည်းငယ်နှင့်သူ့ကို DJ သမားအဖြစ်သာချစ်သောအခြားသူများရှိခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိ Subskile သည်အွန်လိုင်းတွင် virtual ဖျော်ဖြေပွဲ ၈ ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် (YouTube ပေါ်မှာအားလုံး) ။ သူက DJing ကိုမရပ်တန့်နိုင်လို့တစ်ချက်တည်းမှာပဲကျိန်းသေလုပ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ DJing သံသယမရှိဘဲသူ၏အဓိကဝါသနာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်မသိပါက၊ ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလတွင် Subskile သည်သူ၏အကြိုက်ဆုံး DJ Slushii ဖြစ်သော Fortnite နှင့်စကားပြောဆိုပြီးကစားခဲ့သည်။ သူဟာသူဟာပျော်ရွှင်မှုအရှိဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Slushii အကြောင်းပြောရရင်သူဟာ Subskile ကိုသူရဲ့ယနေ့လူဖြစ်လာဖို့စိတ်အားထက်သန်စေတဲ့သူဆိုတာသေချာပါတယ်။ သူသည်လူတိုင်းအတွက် Slushii ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်သည်။ သူ့ကိုမှုတ်သွင်းသူနောက်တစ် ဦး မှာ Marshmello ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာတကယ့်ပါရမီရှင်ကြင်နာတတ်တဲ့၊ ဇွဲရှိရှိ DJ သမား ၂ ယောက်ပါ။
သငျသညျ DJ ဖြစ်လိုလျှင်လည်း Subskile ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာပါ။ စတင်ထွက်ခွာရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်သင်ဆက်လက်သွားသင့်သည်။ ဤသည် Subskile မှဖြစ်ပျက်အတိအကျကား, ယခုသူ့ကိုကြည့်ရှုပါ! သူကအရမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့ DJ တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။
အများပိုင်သတင်း DJ ဂီတ Subskile